Hojii uumuu - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:55 8 Fuulbaana 20214:55 8 Fuulbaana 2021
Qaammee keessa qorannoo fayyaa bilisaan
Wiituun Qorannoo Fayyaa Wuddaasee waggoota 12 dura ture kan hojii eegale. Bara kana dabalatee waggaa waggaan guyyoota Qaammee hunda tajaajila qorannoo fayyaa bilisaan kennaa jira. Maaltu dhaabbaticha kakaase?
...tti maxxanfame 4:24 3 Fuulbaana 20214:24 3 Fuulbaana 2021
'Maallaqa hojjechaan ture, garuu maallaqa hin qabu'
Namni abbaa kaannisaa jedhamu Iskoot Daaviis isaaf rakkoon maallaqa callaa of harkaa dhabuu jechuun ammam hojiin isaa bu'a qabeessa ta'ullee "maallaqa dhabuu".
...tti maxxanfame 5:07 18 Waxabajjii 20215:07 18 Waxabajjii 2021
Weerarri Koroonaa hojiifi egeree jireenyaa dargaggoota hedduu danqe. Dargaggoo gana 22 kan tahe Aleeks Wiikens rakkoo yeroo weerara Covid-19 mudateef fala kennuuf carraa kanatti fayyadameera.
...tti maxxanfame 5:33 23 Caamsaa 20215:33 23 Caamsaa 2021
Yunivarsitiin Wallaggaa dargaggoota 'xiyyaara Oromiyaa' balaliisuu yaalanif deeggarsa godhe
Obbolaan lamaan Biqilaafi Lalisaa Daani’el ‘xiyyaara Oromiyaa’ tolchanii balaliisuu yaalan Yunivarsiitiin Wallaggaa isaan deeggaruuf waadaa akka isaanii seenee BBC’tti himan. Jimaata darbe laaptoppii akka isaaniif kenne dubbataniiru.
...tti maxxanfame 4:22 17 Bitooteessa 20214:22 17 Bitooteessa 2021
Hojii amma dalaguu dandeenyu maaliif ‘boru ni qaqqaba’ jenna?
Yeroo baa’yye namootii hedduun, hojjii yeroo sun dalaguu danda’an, yeroo birootti dabarsu. Waa’ee xinnoo akka iimeelii ykn ergaa gabaabaa namatti erguu ta’u danda’a, ykn waan daqiiqaa tokko fudhachuu danda’u kan akka namaaf bilbiluu. Maaliif achi dabarsina?
...tti maxxanfame 7:34 14 Bitooteessa 20217:34 14 Bitooteessa 2021
Waldaan hundaa'e kalaqxoota hojiif waan gaarii fidaa laata?
Waldaan hojii uumtotaa miseensota guutuu biyyattiirraa dhufan 600 ol qabu hundaa’uu miseensonni BBCtti himaniiru.
...tti maxxanfame 7:37 12 Bitooteessa 20217:37 12 Bitooteessa 2021
Namicha Harvaard irraa barnoota addaan kutee biiliyeenara ta’e
Dhabbati daldala interneetarraa Kooriyaa Kibbaa Koopang Kamisa qooda isaaa gabaatti dhiyeessee booda hundeessaan dhaabbatichaa Boom Kiim biiliyenara taasiseera.
...tti maxxanfame 3:38 29 Fuulbaana 20203:38 29 Fuulbaana 2020
Dubartii ofiin araada tamboo mo'achuun kaaniif fala taate
Sagantaa barnootaa kunis hoggantoota dhaabbilee Fortune 500, atileetotaa fi namoota beekamoo dabalatee namoota 250,000 guutuu addunyaarratti argamaniif tajaajila kennaa jira.
...tti maxxanfame 5:00 27 Fuulbaana 20205:00 27 Fuulbaana 2020
Gurraachota daldala bunaan milkaa'an
Yeroo ammaa kanatti daldalli bunasaanii Blk &Bold jedhamu US keessatti buna biraandii bal'inaan gabaadhaaf dhiyaateedha jedhamee amanama.
...tti maxxanfame 8:30 13 Fuulbaana 20208:30 13 Fuulbaana 2020
'Ani dubartii ganna 72ti, umuriin koo qabeenya naaf ta'e'
Dubartooni haguma umuriin isaanii dabalaa adeemu iddoo hojiitti loogiin sababa umurii fi koorniyaan irra gahu dabalaa adeema.